Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "mambo", manzwiro anokumhan'arira wacho?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "mambo", manzwiro anokumhan'arira wacho?
"Emperor" neizvi chinzvimbo zvichireva
nyanzvi pamusoro 3500 Yen wakasununguka yokunyatsoongorora kuwana nzira
choushe zvikukutu agere mambo norukudzo kuti kufembera. Emperor kutambudzika korona, ruoko ane tsvimbo. Uye nzvimbo iyoyo anomirira chokwadi muna youshe, unova muchinjikwa kuti unomirira nyika anomweya decoration, sezvo dziri pakukwirira pemaziso youshe, kutarisa zvinhu mambo anogara mberi-achitarisa pezvaaitsigira, rave sokureva kadhi rinomiririra vatungamiri uye baba vanokakata nyika ine simba. Mambo kadhi iri rume, kuzivikanwa, kudzikama, kuzadzika, chiito simba, simba, anomirira kuti mhanza anouya Hirake nokuda kwakakasharara.
mambo kadhi anomirira manzwiro
utungamiriri simba uye utungamiriri munhu iwe zvakanaka nzvimbo iri nokuzvikudza kuti zvinoreva mambo kana kuwana zvakanaka chinzvimbo, kuiswa norudo vanobishairira kuita kuti vanhu vaviri ukama kunokura iri, kana ungafunga kuti kuzadzika.
nyaya vaviri ndinofunga vanhu anokumhan'arira anoda kutungamirira hwehasha rudo. Mupikisi anongofunga rudo newe mukutenda zvakanaka mune zvakanaka, nekuti waifanira uyewo mumunda maonero chero muchato, ungada kuenda kufambidzana kuvimba mumwe bato. Kana vanhu
rusina kukwana mberi rudo unofanira kuva ini kupindura mukutenda zvakanaka pamusoro penyu. Ukuwo, zviri refu wokuti kuti harioneki murudo chinhu. Uye akatanga kunyorerana Nezvagara Zviripo, Ngativei kuvimbwa nevamwe mubato.
mambo kadhi apo zvinoreva ndiye "utsinye." Tichakurukura kuzarura mugwagwa zvishoma nezvishoma achishandisa anoenda mberi kutenda mumwe bato asingadi kutya chinhu. Sezvo anokumhan'arira munhu utungamiri yakanga yagadzirira Kuti zvikukutu, mugotenda kuenda kudanana.
mambo kuderedza nzvimbo mambo zvinofanirwa kwaireva akabuda ari neizvi nzvimbo, mumwe bato haritsigiri mukutenda zvakanaka panyaya dambudziko rako Kune pfuma inishuwarenzi. Musafunga muchato rudo newe, handidi kutora basa, zvingangoita kuti vari kudanana ne inertia. To
haana Kira yakabikwa mafungiro nokuti unenge zvinoodza kuva mupfungwa, Chekutanga zvose zvakafanira kudzikama kuchengeta chinhambwe nemanzwiro mumwe.
ungada kugadzirisa kuonekana Kana kuti haachinji mafungiro asina kunaka mumwe webato. Kana vanhu rusina kukwana mberi rudo isu kuita pachokwadi kwamuri, asi iwe uri zvichida kuonekwa kubva kumusoro chinhu kwenyu.
nokuti chichava kuoma iri rava ukama sezvo pasi uye Vakuru kutanga kupinda kudanana, First vachauya zvinovawo zvakakodzera kuti atonhodze kuziva mafungiro mumwe webato. Zvinokurudzirwa kuti unoedza kutaura panguva.